3,684 / 49,636 Strings (7 %)
Filter ↓ • Sort ↓ • All (49,636) • Untranslated (45,774) • Waiting (92) • Fuzzy (104) • Warnings (29)
↑	 Real Estate Agent	 အိမ်ခြံမြေပွဲစား	 Details
2019-12-05 09:38:15 GMT
↑	 Digital Marketing	 ဒစ်ဂျစ်တယ် ဈေးကွက်တင်ခြင်း	 Details
2019-12-05 09:38:48 GMT
↑	 Website Designer	 ဝဘ်ဆိုဒ် ဒီဇိုင်းရေးဆွဲသူ	 Details
2019-12-05 09:39:38 GMT
↑	 Cameras & Photography	 ကင်မရာများနှင့် ဓါတ်ပုံပညာ	 Details
2019-12-05 09:40:00 GMT
↑	 Travel Agency	 ခရီးသွားလာရေး ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း	 Details
2019-12-05 09:41:12 GMT
↑	 Fashion Designer	 ဖက်ရှင် ဒီဇိုင်းရေးဆွဲသူ	 Details
2019-12-05 09:41:25 GMT
↑	 Restaurants	 စားသောက်ဆိုင်များ	 Details
2021-12-11 13:09:00 GMT
↑	 Welcome to the WordPress.com community.	 Wordpress.com အသိုင်းအဝိုင်းမှ ကြိုဆိုပါတယ်။	 Details
Wordpress.com အသိုင်းအဝိုင်းမှ ကြိုဆိုပါတယ်။
2019-12-05 09:41:45 GMT
↑	 Occasionally, some of your visitors may see an advertisement here, <br />as well asa<a href="%s" target="_blank">Privacy & Cookies banner</a> at the bottom of the page.	 တစ်ခါတစ်ရံတွင် သင့်ထံလာရောက်ဖတ်ရှုသူများအနေဖြင့် ဤနေရာတွင် ကြော်ငြာတစ်ခု <br /> နှင့်အတူ <a href="%s" target="_blank">ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု နှင့် ကွတ်ကီးများဆိုင်ရာ ကြော်ငြာချက်</a> ကို စာမျက်နှာ် အောက်ဆုံးတွင် တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။	 Details
တစ်ခါတစ်ရံတွင် သင့်ထံလာရောက်ဖတ်ရှုသူများအနေဖြင့် ဤနေရာတွင် ကြော်ငြာတစ်ခု <br /> နှင့်အတူ <a href="%s" target="_blank">ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု နှင့် ကွတ်ကီးများဆိုင်ရာ ကြော်ငြာချက်</a> ကို စာမျက်နှာ် အောက်ဆုံးတွင် တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။
2019-12-05 10:00:25 GMT
↑	 Setadifferent content width for full size images.	 ဆိုဒ်ပြည့်ပုံတွေအတွက် မတူညီတဲ့ အနံတစ်ခု သတ်မှတ်ပါ။	 Details
ဆိုဒ်ပြည့်ပုံတွေအတွက် မတူညီတဲ့ အနံတစ်ခု သတ်မှတ်ပါ။
2019-12-05 10:04:00 GMT
↑	 About	Default page title အကြောင်းအရာ	 Details
2019-12-05 10:04:08 GMT
↑	 This is an example ofapage. Unlike posts, which are displayed on your blog’s front page in the order they’re published, pages are better suited for more timeless content that you want to be easily accessible, like your About or Contact information. Click the Edit link to make changes to this page or <a title="Direct link to Add New Page in your Dashboard" href="%s">add another page</a>.	 ဤစာမျက်နှာသည် ဥပမာတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ သင့်ဘလော့ဂ်၏ ရှေ့စာမျက်နှာတွင် ထုတ်ဝေထားသည့် အစဉ်အတိုင်း ပြသထားသော ပို့စ်များနှင့်မတူဘဲ သင်၏ ကိုယ်ရေးအကြောင်းအရာ သို့မဟုတ် ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ အချက်အလက်များကဲ့သို့ သင်အလွယ်တကူ ရယူလိုသည့် အချိန်ပေးရန် မလိုသော အကြောင်းအရာများပြသသည့် စာမျက်နှာများအတွက် ပိုမိုသင့်တော်ပါသည်။ ဤစာမျက်နှာကို ပြောင်းလဲရန် Edit link ကိုနှိပ်ပါသို့မဟုတ် <a title="အခြားစာမျက်နှာတစ်ခု ထပ်တိုးရန် Dashboard ထဲရှိ New Page ထည့်ရန်" href="%s"> Direct link ကိုနှိပ်ပါ</a>။	 Details
ဤစာမျက်နှာသည် ဥပမာတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ သင့်ဘလော့ဂ်၏ ရှေ့စာမျက်နှာတွင် ထုတ်ဝေထားသည့် အစဉ်အတိုင်း ပြသထားသော ပို့စ်များနှင့်မတူဘဲ သင်၏ ကိုယ်ရေးအကြောင်းအရာ သို့မဟုတ် ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ အချက်အလက်များကဲ့သို့ သင်အလွယ်တကူ ရယူလိုသည့် အချိန်ပေးရန် မလိုသော အကြောင်းအရာများပြသသည့် စာမျက်နှာများအတွက် ပိုမိုသင့်တော်ပါသည်။ ဤစာမျက်နှာကို ပြောင်းလဲရန် Edit link ကိုနှိပ်ပါသို့မဟုတ် <a title="အခြားစာမျက်နှာတစ်ခု ထပ်တိုးရန် Dashboard ထဲရှိ New Page ထည့်ရန်" href="%s"> Direct link ကိုနှိပ်ပါ</a>။
2019-12-05 10:10:24 GMT
↑	 Your Followers	 သင့်ကို စောင့်မျှော်ဖတ်ရှုသူများ	 Details
2019-12-05 10:11:33 GMT
↑	 Jetpack Protect	 Jetpack ကာကွယ်မှု	 Details
2016-01-29 17:28:22 GMT
Optimizr ... (myowin12)
↑	 Expand/collapse	 ချဲ့ပါ/ချုံ့ပါ	 Details
2021-12-11 13:10:10 GMT